ရောင်စုံကြိုးပိုက်ကွန်ကစားကွင်း, ကလေးများကစားကွင်းပစ္စည်း - ငါးကြယ်
ကြယ်ငါးပွင့်, LTD မှထုတ်လုပ်သောအဆိုပါမိုးလုံလေလုံကစားကွင်းအီးယူတို့ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီပြီ။
စက်ရုံထဲကနေတိုက်ရိုက်ပေးပို့, Forward နှင့်အခြားကြားခံအဘို့အဘယ်သူမျှမပိုစွဲချက်, ထုတ်လုပ်သူစျေးနှုန်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံ 13 နှစ်ရှိပါတယ်။ သားသမီးရဲ့ကစားပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, ကုမ္ပဏီ၏တဲ့ professional သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရှိပါတယ် departmen
ကျနော်တို့သားသမီးရဲ့မိုးလုံလေလုံကစားကွင်းများထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြုနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကျိန်းသေသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာလိုအပ်သောအရာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကျယ်ပြန့်ရှိသည်။
Clients တွေအနေနဲ့ Trust မှကျွန်ုပ်တို့အားရာပေါင်းများစွာ!
မိုးလုံလေလုံ ရောင်စုံကျော့ကစားကွင်းကလေးများ လက်ထိုးပြီး တောင်တက်ကျော့
TRAMPOLINE ARENA ကိုရွေးချယ်နည်း
အနည်းငယ်မိုးလုံလေလုံကစားကွင်းအဖြစ်စည်းကမ်းများလျက်ရှိကြသည်ရန်အမိန့်အမျှအဲဒီထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းစက်ပစ္စည်းသိ။ ဤသည်ထိုသို့သောအမျှ Th, ဆွဲဆောင်မှုကိုယ်တိုင်ရဲ့အင်္ဂါရပ်များအားဖြင့်၎င်း, ဒါ့အပြင်အဆိုပါဖောက်သည်များ၏ Wish အားဖြင့်အေးစက်သည် ...
အဆိုပါ Playing ROOM တွင်အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနဲ့အကျိုးအမြတ် Make စေရန်, ဒါဟာပစ္စည်းကိရိယာများဒါဟာနှင့်အတူခေတ်သစ်ဒီ Play လိုအပ်, လွတ်လပ်ရေးနှင့်အဆိုပါထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ၏အထူးကု၏အကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ...
အဆိုပါ Trampoline Arena
ခေတ်သစ် Trampoline Arena မဆိုအသက်ကလေးများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ် Entertainment ကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနောက်ဆုံးရနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းများ, Us ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် Trampoline မဆိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရေးစင်တာပြီးတော့ Layout ထုတ်လုပ်ဖို့ Allow ...
နေရပ်လိပ်စာ: Jinquan အဆောက်အအုံ, Lixia ခရိုင်, Jinan စီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-531-58788171
© မူပိုင်ခွင့် - 2019-2022- All Rights Reserved. ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
ပစ္စည်းကိရိယာ Importers Play , သင်တန်း ကိရိယာ , ကစားကွင်းပစ္စည်းကိရိယာ , အမြင့်ခွန်အားနိုင်လွန် Trampoline ခုနှစ်တွင်အဆိုပါသစ်ပင်များ , သူငယ်တန်း Play စသည့်ပစ္စည်း , ဖျ Kid ဂိမ်း Tree House ရဲ့ Play ,